फिफा वर्ष खेलाडी अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक, को-को परे ? - Vishwanews.com
फिफा वर्ष खेलाडी अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक, को-को परे ?
काठमाडौं । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले वर्ष खेलाडी २०२१ को मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। फिफाले सोमबार ‘द वेस्ट फिफा’ अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गर्दै दावेदारहरु को को छन् भन्ने जानकारी गराएको हो । फिफाले सार्वजनिक गरेको मनोनयनको मध्ये पुरूषतर्फ ११ जना खेलाडी छन् । महिलातर्फ १३ खेलाडी छन् । महिला प्रशिक्षकतर्फ ५ जना र पुरुष प्रशिक्षकतर्फ ७ जना मनोनयनमा छन् । महिला र पुरुष गोलकिपरमा समान ५ जना मनोनयनमा छन् ।
विजेता घोषणा जनवरी पहिलो साता हुने छ ।
लेवान्डोस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, केलियन एमबाप्पे, नेयमार र मोहमद सलाह, करिम बेन्जिमा, केभिन डे ब्रुएन, अर्लिङ हालाण्ड, जोर्गिन्हो, एन्गालो कान्टे
स्वीडेनकी स्टिना ब्लाकस्टेनियस, स्पेनकी आइटाना बोनमाटी, इङ्ल्याणकी लुसी ब्रोन्ज, स्वीडेनकी म्याग्डालेना एरिक्सन, नर्वेकी क्यारोलिन ग्राहम ह्यान्सेन, डेनमार्ककी पेर्निल हार्डर, स्पेनकी जेनिफर हर्मोसो, कोरियाकी जी सोयुन, अष्ट्रेलियाकी साम केर, नेदरल्याण्डकी भिभियान मिडेमा, स्पेनकी एलेक्सिया पुटेलास, क्यानडाकी क्रिस्टीन सिन्क्लेयर र इङ्ल्याण्डकी एलेन ह्वाइट